ယာကူဇာနဲ့ မတူတဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာနဲ့ ဂိုဏ်းဖွဲ့စည်းပုံများ – Cele Channel
ယာကူဇာနဲ့ မတူတဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာနဲ့ ဂိုဏ်းဖွဲ့စည်းပုံများ
Posted on February 3, 2018 Author Cele	Comment(0)
10 Female “Samurai”
9 The Armor
ဆာမူရိုင်းတွေဟာ သီးသန့်ဖက်ရှင်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ သူတို့ဟာ ဂျပန်ကီမိုနိုနဲ့ အပွင့်ရိုက်တွေကို ဝတ်ဆင်တတ်သလို ရိုးရာဖျင်ကြမ်းကို ပေါ့စွာ ဝတ်ဆင်နိုင်အောင် ချုပ်ဝတ်တာမျိုးရှိပါတယ်။တကယ်တော့ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ကီမိုနိုတွေဝတ်ပြီး ခြေထောက်တွေ တုပ်ပြီး ဖြေးဖြေးလေး သွားနေကြသူတွေမဟုတ်ပါဘူးလွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ ဓားရေးကို လျင်လျင်မြန်မြန် ကစားနိုင်တဲ့ ဝတ်စုံတွေသာ ဝတ်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို ဝတ်စုံတွေကတော့ လက်ရှိမှာ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင် ဝတ်ဆင်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်စစ်သားတွေကိုင်တဲ့ ကင်ဒိုဓားတွေရဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေဟာ ပြောမကုန်အောင်ဖြစ်ပြီး သံတောင်ပြတ်လောက်တဲ့အထိ ဓားသွားတွေ ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အရိုးတွေ နှစ်ပိုင်းပြတ်အောင် ခုတ်နိုင်တဲ့ ဒီ ကင်ဒိုဓားတွေကို ဆာမူရိုင်းတွေ အရင်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့မှာ ဓားနဲက ပတ်သက်တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ကိုယ်ပိုင်ပန်းပဲဖိုတွေပါ ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဓားသမားတစ်ဦးကို လက်ခံပြီး ရိုက်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ နောက်တစ်ယောက်လာအပ်လို့ ရိုက်ပေးတဲ့ပုံစ့မှာ မူအနည်းငယ်ကွဲတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့အတွက် ရေရှည်စီမံကိန်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ အကြီးအကဲတွေဟာ ဆာမူရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ တိုက်ရည်ခိုက်ရည်ကောင်းပေမယ့် ပညာမတတ်ရင် လမ်းကြောင်းလွဲချော်ကာ လူမိုက်လူရမ်းကားသာသာဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်ပြီး ပညာပိုင်းကို အထူးဦးစားပေးသင်ကြားခဲ့ရာမှ ဆာမူရိုင်း မျိုးဆက်ပြတ်လုနီးပါးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အကုန်လုံးဟာ ပညာတတ်တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး ဆာမူရိုင်းအဖွဲ့ထက် စီးပွားရေးကို ပိုအာရုံစိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။16ရာစုက ဆာမူရိုင်း ရွေးချယ်မှုက အနည်းဆုံး အရပ်ကတော့5ပေ3လက်မလောက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီး ဓားရဲ့ ဝိတ်နဲ့ အရှည်ကို ထမ်းနိုင်တဲ့ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ လက်တွေရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှ ခြောက်ပေကျော်လောက်ရှိတဲ့ ဥရောပသားတွေကို တိုက်ခိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပက်သတ်တဲ့ စစ်ချက်တွေ အမြဲယူပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းတွေဟာ စစ်မြေပြင်မှာ အမှားအယွင်းလုပ်မိတာနဲ့ စစ်ပွဲမှာ ရုံးနိမ့်သွားတဲ့အခါ ရန်သူ့လက်နဲ့ အသတ်မခံပဲ သူတို့ကို သူတို့ ဗိုက်ကို ကင်ဒိုဓားနဲ့ ခွဲကာ သတ်သေတတ်ပါတယ်။ဒီနာကျင်မှုကို သူတို့မကြောက်ပါဘူး။သူတို့ဟာ ဆာမူရိုင်းအဖြစ်သို့ရောက်လာခြင်းအပေါ် သူတို့အသက်တွေကို စွန့်လွှတ်ဖို့ စိတ်ဓာတ်နေ့တိ်ုင်း ထားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က အရင်လား ဂျပန်ပြည်က အရင်လား
Posted on January 24, 2018 Author Cele
ငလျင်ပညာရှင်များက မြန်မာပြည်ရော ဂျပန်ရော ငလျင်ကြီးတွေ လှုပ်တော့မယ်လို့ ပြောနေကြပါတယ်။ ငလျင်ဆိုတာ ဘယ်ပညာရှင်မှ လှုပ်မဲ့အချိန်မခန့်မှန်းနိုင်ကြပါ၊ ငလျင်လှုပ်ပြီးမှသာ တိုင်းတာလို့ ရကြပါတယ်။ သို့သော် ပညာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ သုတေသနမှတ်တမ်းတွေအရ အနှစ်(၈၀)ကနေ အနှစ်(၁၀၀)အတွင်းမှာ (magnitude ၇အထက်-၈-၉)လောက်ရှိတဲ့ ငလျင်ကြီးတွေ လှုပ်ခတ်တတ်တယ်လို့ ပညာရှင်အများစုက သီအိုရီထုတ် ခန့်မှန်းဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်။ နောက်ပညာရှင်တချို့က အနှစ်(၁၀၀ကနေ ၁၆၀)အတွင်း တကျော့ပြန် လှုတ်ခတ်တတ်တယ်လို့ဆိုကြပြန်တယ်။ ဒီတော့ နှစ်၁၀၀-ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း တကျော့ပြန် လှုပ်ခတ်မှာတော့ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ကြပါဘူး။ ဒီတော့ မြန်မာနဲ့ ဂျပန်မှာ လာတော့မယ်ပြောတဲ့ ငလျင်ကြီးတွေကို လေ့လာဖို့ လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ငလျင်ကြီးတွေ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်က ဘယ်လောက်ပြင်းအားနဲ့ လှုပ်ခတ်သွားသလဲလေ့လာရင် ၁ ။ ။ ၁၈၃၉ ခု၊ မတ် ၂၁ နဲ့ […]
သမီးလှလာဟင့်… ဆိုတဲ့နောက်မှာ သားကောင်ရှာတဲ့ ကျားတချို့ပေးတဲ့ likeသိန်းချီ ရလို့ တဏှာရူးတွေ ရဲ့ အလှဘုရင်မ အဖြစ် မော့ကြွားနေကြပြန်တယ်’
Facebookပေါ်မှာ မိန်းမသား တချို့ မှားယွင်းမှု တွေ နဲ့သာယာ နေကြတာ တွေ့ရတယ် ပုရိသ ကျားသဘာဝ ကိုနားမလည် ထင်ပေါ်မှု အတက် မပေါ် ပေါ်အောင်ဖော်လို့… အဝတ် ဖလာ လေးတွေ နဲ့ဆယ်လီရူး ရူးနေကြပြန်တယ် …. သမီးလှလာဟင့်… ဆိုတဲ့နောက်မှာ သားကောင်ရှာတဲ့ ကျားတချို့ပေးတဲ့ likeသိန်းချီ ရလို့ တဏှာရူးတွေ ရဲ့ အလှဘုရင်မ အဖြစ် မော့ကြွားနေကြပြန်တယ် ။ ညစ်ညမ်း မှုတွေ အောက်မယ် သား မယား အဖြစ်ဆဲဆိုခံနေရလည်း သူ့မ တို့ အတွက် စိတ်ထားကောင်းသူ ကြီးအဖြစ် ဖော်ပြလို့ မိမိ ရဲ့ အမှားတွေ ကို ပြုပြင်ဖို့ မကြိုးစာဘဲ ဖော်မြဲ ထုတ်ဖော်ပြမြဲ မို့စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့် […]
တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ သင့်အတွက် အခက်အခဲဆိုတာ မရှိတော့ပါ။ (သိကြားမင်း ဂါထာတော်)
Posted on December 4, 2017 Author Cele
တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင်ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါလား… #သိကြားမင်း ဂါထာတော် တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ ဘုကုတကု ဝေ = ငါ၏ရန်သူ ဟူသမျှတို့သည် …. ဒါ = ဝေးစွာသော အရပ်သို့ …. သာ = လျင်စွာ …. ကု = ပြေးကုန်သတည်း။ ကု = ငါ့အား မကောင်းသဖြင့် ကြံကုန်သောသူတို့သည် …. သာ = […]
ဒေါ်လာ ၁ သန်းထီပေါက်ပြီး တစ်လအတွင်း သေဆုံးခဲ့ရသူ
၁၁ နှစ် ၈ လ သာ ရှိသေးသော ငါးတန်းကျောင်းသူအား”ကျောင်းစာသင်ခန်းအတွင်း ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကြီး”